Ciidamo isugu jira Soomaali iyo ciidamo AMISOM ah ayaa fariisimo ka sameystey wadada u dhexeysa magaalada Jowhar iyo degmada Balcad. | STAR FM SOMALIA
DHAGEYSO:-Barnaamijka Saakay iyo Starfm 24-04-2018
DHAGEYSO:-Warka Duhur Starfm 23-04-2018
DHAGEYSO:-Barnaamijka Saakay iyo Starfm 23-04-2018
DHAGEYSO:-Barnaamijka Saakay iyo Starfm 22-04-2018
DHAGEYSO:-Barnaamijka Saakay iyo Starfm 21-04-2018
Home Wararka Ciidamo isugu jira Soomaali iyo ciidamo AMISOM ah ayaa fariisimo ka sameystey...
Ciidamo isugu jira Soomaali iyo ciidamo AMISOM ah ayaa fariisimo ka sameystey wadada u dhexeysa magaalada Jowhar iyo degmada Balcad.
Ciidamo isugu jira Soomaali iyo ciidamo AMISOM ah ayaa fariisimo ka sameystey wadada u dhexeysa magaalada Jowhar iyo degmada Balcad gaar ahaan goob hore loogu weeraray ciidamada AMISOM iyo kuwa Milatariga ah.
Wararka ayaa sheegaya in ciidamadan ay fariisimo ka dhigteen deegaanka Haan-Sheekh oo u dhexeeya Gololey iyo degmada Balcad iyo sidoo kale deegaanka Gololey.
Ujeedada degitaanka ciidamadan ayaa lagu sheegay inay tahay sidii loo sugi lahaa ammaanka wadada isku xirta degmooyinka Jowhar iyo Balcad.
Ciidamo AMISOM ah iyo kuwa Milatariga Soomaaliya ayaa dhowr jeer hore dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab ku weerareen Haan-Sheekh halkaasoo gaadiid dagaal loogaga gubay ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaalidaba.
Wadada laamiga ah ee isku xirta magaalad Jowhar iyo Balcad ayaa muhiim u ah sidii loo gaarsiin lahaa saadka iyo waxyaabaha kale ee ay u baahan yihiin ciidamada AMISOM ee jooga magaalada Jowhar gaar ahaan garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar halkaa oo saldhig weyn ay ku leeyihiin ciidamada AMISOM.
Previous articleDuqeyn xalay seqdii dhexe ka dhacaday deegaan ka tirsan maamulka puntland
Next articleDHAGEYSO:-Barnaamijka Saakay iyo Starfm 10-04-2018
Xerada Jeneral Gordan oo lagu wareejiyey ciidamada Danab
Dagaal u dhaxeeyay Amisom & Shabaab oo ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha.
Ilaa shan musharax oo la gudoon siiyey Shahaadada Guddoomiyaha Golaha Shacabka(Daawo Sawiro)